ဘဲလ် 206B JetRanger III ကို DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
ခေါင်းလောင်း 206B JetRanger III ကို FSX & P3D
downloads ရယူရန္ 22 648
Author: လင်းယုန် Rotorcraft Simulator
21 / 10 / 2017 အပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် : လိုက်ဖက်တဲ့ Prepar3D v4
07 / 05 / 2015 အပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် : သဟဇာတ, ဗားရှင်း 1.1 အဆင့်မြှင့် P3D.
အဆိုပါလင်းယုန် Rotorcraft Simulator ဘဲလ် 1.1B JetRanger ၏ version 206 ။ ဤသည် updates များကိုမြောက်မြားစွာပြုပြင်မှုများဆောင်တတ်၏နှင့်အဘို့ဤလူကြိုက်များရဟတ်ယာဉ်မှများစွာသောအသစ်ပစ္စည်းများဖြည့်စွက် FSX.
- အဓိကအားဖြင့်အဓိက panel ကိုအပေါ် Recoded အများအပြား animations တွေကို,
- ရဟတ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ spinning မှလွဲ. အားလုံးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအရှင် FILESIZE လျော့ကျလာ, ပိုကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်မှုများအတွက် mipmaps မပါဘဲ DXT1 / DXT5 များမှာ
- တိုးတက်လာသောဖုနှင့် specular မြေပုံ
- fixed ကတော့ float မူကွဲများအတွက်ဆက်သွယ်ပါအချက်များ
- Rotorslap သံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (Stephan Siebertz)
- နယူးလေယာဉ်ဒိုင်းနမစ် (ယော်ဒန်မြစ် Moore က / Hovercontrol)
- နယူး navlight အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (Nobu Aki)
- အတွင်းပိုင်းများအတွက်မြေပုံ Bump
2005 ခုနှစ်, Owen ဝစ် FS2004 ဘဲလ် 206B JetRanger III ကိုတညျဆောကျသညျမိမိခြစ်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ နှစ်တွေကအများကြီးရဟတ်ယာဉ်နိူးတဲ့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးရသောအခါ FSX တလျှောက်သို့ရောက်လာသည်ကား, အတိတ် FS2004 ပိုင်ရှင်တွေသစ်ကို Simulator ကိုအတွက်အတော်လေး display ကိုလက်ျာဘက်မထားတဲ့အသုံးမပြုတော့တဲ့မော်ဒယ်နှင့်အတူထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကလင်းယုန် Rotorcraft Simulator တစ်ခုလုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်း Owen ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ FSX မော်ဒယ်မှဇာတိအဆင့်မြှင့်။ သူကကြင်နာစွာကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံခဲ့ပြီးအဖြစ်မကြာမီဖိုင်တွေကိုအဖွင်ရောက်ရှိအဖြစ်, သူတို့ကဤလူကြိုက်များလွှတ်ပေးရန်ရောက်စေဖို့အလုပ်လုပ်ရန်သွား၏ FSX။ လင်းယုန် Rotorcraft Simulator Owen ဝစ်ရဲ့ဘဲလ် 206B JetRanger III ကိုတင်ဆက်ဖို့ဂုဏ်ယူသည်။